रोगकाे डरले फर्केका मुग्लानी, भोककाे त्रासले पुनः भारत छिर्दै… हेर्नुस् यस्तो कारूणिक तस्विर! – PathivaraOnline
Home > समाचार > रोगकाे डरले फर्केका मुग्लानी, भोककाे त्रासले पुनः भारत छिर्दै… हेर्नुस् यस्तो कारूणिक तस्विर!
एजेन्सी । साउदी अरबबाट हरेक महिना घर खर्च पठाउने छोरो कोरोना कहरमा घर फर्किएपछि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा–१ का सिताराम डगौंरा यतिबेला चिन्तामा हुनुहुन्छ । धन कमाएर घर धान्न भन्दै करिब २२ महिनाअघि रु डेढ लाख ऋण काडेर २५ वर्षीय छोरा राजेन्द्र डगौंरालाई साउदी अरब पठाएका सीतरामको सपना कोरोना कहरसँगै तुहिएको छ । “छोराले विदेशमा कमाएर एउटा ओतबस्ने घरसम्म त बनाउँला भन्ने सोचेको थिएँ”
सीतारामले दुखेसो पोख्दै भन्नुभयो– “छोरो केही दिनअघि रित्तो हात घर फर्कियो, अब दैनिक जिवीकाको त कुरै भएन ऋण कसरी तिर्ने भन्ने भएको छ ।” सीताराम पनि पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया काम गरेर केही वर्षअघि फर्किनुभएको थियो । “छोरा कमाउला र म घरको रेखदेख गरौँला भन्ने सोचेर बसिरहेको थिएँ” उहाँले भन्नुभयो– “बरु अब यहीँ केही काम पाइन्छ कि भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ, तर हामीलाई रोजगारी पनि कसले देला र ?” उहाँले दैनिकी चलाउन गाउँमा मजदुरी पाउन समेत गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो ।
“आफूसँग भएको जग्गामा केही आयमूलक व्यवसाय गरौँ छाडा गोरुले सखाप पार्छन्” उहाँले भन्नुभयो–“मजदुरी गर्न भारत जाऔँ त्यहाँ कोरोना बढेको समाचार दिनदिनै सुन्दा जानै मन लाग्दैन, मनभरि डर मात्र छ ।” उहाँको पाँच जनाको परिवार छ । उनीहरुलाई खर्च जुटाउन पनि जारी बन्दाबन्दीका कारण निकै नै समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दशैंमा छोरो आउछ भनेर दिन गनेका परिवारले लाश कुर्दै…
एसईई परीक्षा शुरू हुनै लाग्दा अचानक रोकियो, अब कहिले होला परीक्षा